Kulan lagaga Hadlayay Sii Xoojinta Qorshaha Biyo Xidheenad. - Cakaara News
Kulan lagaga Hadlayay Sii Xoojinta Qorshaha Biyo Xidheenad.
Jigjiga(cakaaranews) sabti, 30ka April, 2016 kulan uu soo diyaariyay xafiiska horumarinta khayraadka biyaha DDSI ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI. kulankaasi ayaa waxay ujeedadiisu ahayd mid lagu kala qaadanayay cashiradii laga bartay hirgalinta qorshihii biyo xidheenada sanadkii 2008TI iyo sidii loogu diyaar garoobilahaa fulinta qorshaha biyo xidheenada 2009ka TI.
Kulankaa oo loo qabtay maamulada degmooyinka iyo gobolada DDSI ayaa waxaa furitaankiisii ka soo qaybgalay masuuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka horumarinta khayraadka biyaha DDSI murwo Fartuun Mahadi Cabdi, wasiirka xafiiska maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI mudane Axmed cabdi Maxamed, wasiir ku xigeenka xafiiska madaxtooyada DDSI mudane Ibaahin Aadan mahad (Sacab) iyo wasiir ku xigeenka xafiiska biyaha mudane cabdiraxmaan curaagte.
Waxaana furitaankii kulankaasi ka hadashay wasiirka xafiiska horumarinta khayraadka biyaha DDSI marwo Fartuun Mahdi Cabdi oo ka warbixiyay qorshihii 2008da ee dhinaca biyo xidheenada guulaha laga soo hooyay iyo cashiradii laga qaatay fulinta qorshahaasi waxayna sheegtay wasiiradu in cilmigii iyo waayo aragnimadii laga bartay fulinta qorshihii hore lagu hirgalindoona qorshahan biyo xidheenada 2009TI.
Intii uu kulankani socday waxay booqdeen masuuliyiinta heer deegaan, maamulada degmooyinka iyo goboladu biyo xidheenka waaji ee laga hirgaliyay degmada koonfurta jigjiga halkaasi oo ay siwada jir ah tusaale uga qaadanayeen.